Android မှာ နေရာလွတ်များ ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ? - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > Android မှာ နေရာလွတ်များ ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
Android မှာ နေရာလွတ်များ ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 8:44 PM Android Tutorial, နည်းလမ်းများ
သင့် Android Phone မှာ နေရာလွတ် မရှိတော့လို့ App များ အင်စတောလုပ်လို့ မရဘူးလို့ စာသားပေါ်လာရင် စိတ်ပျက်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများ ရှိပါတယ်။ မသုံးတဲ့ Apps များကို ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဓါတ်ပုံများကို Cloud မှာ သိမ်းခြင်း၊ Cache များ ရှင်းလင်းခြင်း ၊ Offline Maps များကို ဖျက်ခြင်း စတဲ့ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
Android မှာ နရောလှတျမြား ရအောငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ ?
Settings ထဲမှ Apps or Manager Apps ထဲသှားပွီး တဈခုခငျြးစီကို နှိပျကွညျ့ရငျ Cache ကဏ်ဍကို တှနေို့ငျပါတယျ။ Cache မြားဟာ အမှိုကျဖိုငျတှဖွေဈပွီး စိတျခစြှာ ရှငျးလငျးနိုငျပါတယျ။ Clear Cache Button ကို နှိပျပွီး ရှငျးလငျးနိုငျပါတယျ။ App တဈခုခငျြးစီအတှကျ ရှငျးလငျးရတာ အလုပျရှုပျရငျ Settings> Storage > Cache Data ကို နှိပျပွီး အိုကကေို နှိပျပေးရငျ Apps အားလုံးရဲ့ Cache မြားကို ရှငျးပေးမှာပါ။
Android မှာ နေရာလွတ်များ ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ? Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:44 PM Rating:5သင့် Android Phone မှာ နေရာလွတ် မရှိတော့လို့ App များ အင်စတောလုပ်လို့ မရဘူးလို့ စာသားပေါ်လာရင် စိတ်ပျက်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင...